samedi, 12 mars 2016 12:14
Fifanarahana arak'asa eo anivon'ny Kaominina Antananarivo
Notontosaina tetsy amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana arak'asa momba ny ho fampiasana ny “hologramme”. Tokony hasiana “hologramme” daholo ireo karazana taratasy ampiasaina eo anivon'ny Kaominina mba hialana amin'ny hosoka.
Fankalazana 8 martsa Sakaraha
vendredi, 11 mars 2016 08:57
Sakaraha : Namela fahatsiarovana ny 08 martsa
Nanamarika ny 08 martsa, Andron’ny vehivavy tao Sakaraha tamin’ity 2016 ity ny nananganana tsangambato. Ny Solombavam-bahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ny Distrikan’i Sakaraha, Tinoka Roberto, no niantoka manontolo ny fanamboarana azy, araka ny fangatahan’ireo Fikambanam-behivavy ao an-toerana.
jeudi, 10 mars 2016 22:37
Andro iraisam-pirenena momba ny Voa
Maherin'ny 200 000 ny olona marary voa eto Madagasikara. Notontosaina tetsy amin’ny DLC Anosy androany ny andro iraisam-pirenena hoan’ny voa. Soritra aretina efatra toy ny mipipi lava, ny diabeta, ny tosi-drà miakatra ary ny kista no fambara miseho amin'ny olona iray mety ho voan’ity aretina ity, ka tokony hanantona tobim-pahasalamana avy hatrany. Manodidina eo amin'ny 20.000 ka hatramin’ny 40.000 dolara ny fitsaboana azy ity.
jeudi, 10 mars 2016 22:24
Olona manana fahasembanana : Maro ny olana sedraina
Manana zo toy ny olona rehetra ny olona manana fahasembanana ka tsy tokony havakavahana na hailikilika amin’ny lafin-javatra rehetra. Nanatanteraka valandresaka tetsy amin’ny Plan Anosy ny PFPH (Platform des Federations Handicapped de Madagascar) ho fanazavana ny zo ho an’ny olona manana fahasembanana fa indrindra ny vehivavy.